Laga soo bilaabo Oktoobar iyo dhowr bilood, Cnam waxay ku siineysaa, iyada oo loo marayo barta tababarka billaha ah, safar yar oo adduunka ah si loo ogaado ama dib loogu soo celiyo xarumaheeda ajnabiga ah iyo tababbarkooda. Bishan waxay u socotaa Marooko!
Xarumaha Cnam waxaa loogu talagalay ugu horreyn hanti-dhowrka deggan shanta waddan ee aasaasiga ah, laakiin sidoo kale waxaa loogu talagalay inay ka soo dhalaalaan heer gobol; Xaaladdan oo kale xarunta Cnam Morocco, Maghreb iyo sidoo kale Galbeedka Afrika
Ku sugan Morocco in ka badan 15 sano, xaruntu waa hay'ad rasmi ah oo wakiil ka ah CNAM dalka, laguna aqoonsaday heshiis diblomaasiyadeed oo laba geesood ah; Waxay awood u yeelatay inay horumariso shabakad qaran oo hadda leh ku dhowaad labaatan hay'adood oo shuraako ah: jaamacadaha, iskuulada injineernimada iyo iskuulada maamulka, iwm
Maanta waxay bixisaa xulasho ballaaran oo koorsooyin waxbarasho ah oo u oggolaanaya helitaanka diblooma - liisanka - mastarka - cinwaanka injineerka, waji ka waji, masaafada ama isku dhafka, badiyaa iyada oo qayb ka ah shahaado labalaab ah.
Koorsooyinka tababarka ugu weyni waxay bixiyeen IT-ga Caafimaadka iyo badbaadada Tamarta Madaniga injineernimada Nidaamka korantada Maareynta Ganacsiga Ganacsiga, suuqgeynta, Xisaabaadka iibka, xakamaynta iyo hubinta ilaha aadanaha.
Soo qaado faylka xarunta 'Cnam'
Tababarka caalamiga ah ee Cnam - Tababbarka Cnam ayaa lagu bixiyaa Morocco July 10th, 2021Tranquillus
READ Warshadaha cuntada: waxay hagaajiyaan waxqabadka tamarta
horeBilaash: U adeegso qaybaha si aad u shaandhayso xogta
socdaXarfaha iyo lambarrada Ingiriisiga